तिथि मेरो पत्रु » 8 तपाईं सोध्नुपर्छ महान् पहिलो तिथि प्रश्न
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 21 2020 |2मिनेट पढ्न
हामी सबै पहिलो तिथिहरु मा भएको छु. तिनीहरूले केही तिथिहरु पछि सम्बन्ध गर्न नेतृत्व वा समाप्त भएको छ कि छैन भनेर, हामी सबै यो पहिलो उद्घाटन बैठक संग आउने दबाब र फिक्री थाह. वास्तवमा, पहिलो तिथिहरु समाजमा सबैभन्दा स्नायु-चालाकी अवस्थामा रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ. तर म एक सानो गुप्त मा तपाईं मा गरौं हुनेछ: एक सफल पहिलो तारीख गर्न प्रमुख शान्त छ, सहज कुराकानी. यो सजिलै राम्रो-चुनिएका पहिलो तारीख प्रश्नहरू माध्यम गर्न सकिन्छ.
कसले आफ्नो जीवन मा सबै भन्दा ठूलो प्रभाव रहेको छ?
यो प्रश्न सोधेर, तपाईं बेहतर आफ्नो मिति गरेको नैतिकता र मान बुझ्न. तिनीहरू निर्देशन र सल्लाह को लागि हुनेछ पनि यो तिमीलाई देखाउने.
सम्पूर्ण संसारमा आफ्नो मनपर्ने ठाउँ कहाँ छ? किन?
यो समुद्र तट छ कि छैन भनेर, पहाड, वा कतै बीचमा, यो प्रश्न आफ्नो तिथिहरु 'वर्ण अन्तरदृष्टि दिनेछु.
सबै समय आफ्नो मनपर्ने चलचित्र कुन हो? किन?
मात्र यो तपाईंको मिति 'स्वाद र चासो देखाउने तर यो पनि उपयुक्त छन् भने हेर्न राम्रो सूचक हो.
के अहिले जीवनमा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो?
यो प्रश्न मात्र आफ्नो मिति कति महत्वाकांक्षी तपाईं सक्दिनँ तर तिनीहरूले छन् भनेर जीवनको ठीक चरण अन्तरदृष्टि दिनेछु.
आफ्नो सप्ताह खर्च गर्न आफ्नो मनपर्ने तरिका के हो?
यस प्रश्नको जवाफ आफ्नो मिति गरेको जीवनशैली देखाउने, गतिविधिलाई, र सोख. यो तपाईं संगत हो भने हेर्न अर्को राम्रो प्रश्न हो.
के हुर्कंदै जस्तै आफ्नो परिवार थियो?
तिनीहरूले उठाउने तपाईं कसरी गर्न व्यक्त हुनेछ मिति उठाइएको थियो कसरी एक झलक पाउने (वा कुनै-कुनै अवस्थामा, हुर्काउने छैन) तिनीहरूका भावी सन्तानहरू. यो जवाफ पनि आफ्नो मिति जीवनमा व्यवहार गरिएको छ कति सूचक हो, आफ्नो चरित्र अझ देखाउने.
के तपाईं आकर्षक पाउँछौं?
रसायन र शारीरिक आकर्षण भएको वाहेक, राम्ररी आफ्नो मिति वर्णन गरिएको गुणहरू सुन्न. यस प्रश्नको जवाफ तिनीहरूले एक साथी मा चाहनुहुन्छ ठ्याक्कै के गर्न खोजिरहेको छ. अनि अक्सर छैन भन्दा, तिनीहरूले सूची गुणहरू तिनीहरूले अधिकार भनेर हुन्छन्.
तपाईं Relive गर्न प्रेम भनेर एक दिन के हो?
तपाईं मात्र आफ्नो मिति जीवन मा एक झलक प्राप्त रूपमा यो प्रश्न एकदम बताउने छ तर तिनीहरूले तिमीहरूलाई यो वर्णन रूपमा तपाईं ती छोटो मिनेट लागि तिनीहरूलाई यो Relive प्राप्त.
पक्कै यी प्रश्नहरूको पहिलो कदम मात्र हो. जब सम्म तिमी ध्यान दिएर सुन्न रूपमा, हो पनि व्यक्तिगत वा उत्सुक छैन, र साँचो हो, तपाईं रमाइलो पहिलो तारीख छ यकीन गर्दै छन्.
5 कुराहरू Girls एक ब्रेकअप पछि के